AF-HAANEEDKA SOOMAALIGA: October 2008
Si aynu uga jawaabo bixino, isweydiimihii hore ee ku saabsanaa af-haaneedka Soomaaliga, bal aynu soo bandhigno abla-ableyntiisa afka, oo ah siyaabihiisa kala duwan ee jiri kara.
Afku wuxuu u kala baxayaa laba FOOC.
1. HADAL(Discourse): Waa afka lagu wada hadlo, ee aan taawo iyo tab adag toona loo cuskanin dhabadsigiisa. Wuxuu isaguba kala leeyahay, jaadad sida hoos ku xusan.
2. HAWRAARTAN(Propositional): Waa afka lagu sheegto wax mudnaan loo yeelayo, ee laga malko koraysiinayo hadalka yaalaaba la maqlo.
1.1- Laqbe(Dialect): Waa dooqaab(Variety Of Language) ka jira degel walba oo beeli ku dhaqan tahay, taasoo ah kala gedisnaan xaga ereyada, oo laqbeyaashu ku kala gedisan yihiin. In kastoo haddana ay badan yihiin, ereyada ay ka siman yihiin laqbeyaashu, maxaayeelay af qudha ayay tirsan yihiin, taasuna waa mid ka muuqanaysa wadaaga ay ereyo wadaagayaan. Kala duwanaanshaha laqbeyaasha waxa la dareemaa, marka la is barbar dhigo, tusaale: - Xaad rabtaa? iyo Maxaad doonaysaa?, waa laba odhaahood oo isku macne ah, waxay se kala yihiin laba laqbe oo af-Soomaali ah, oo ka kala jira laba degel. Marar kale laqbeyaashu waxay ku kala gedisnaadaan xaga JAWAQA(The accent). Sida: -BADHEEDH iyo BAREER.
1.2- Meerane(Colloquial): Waa dooqaab hadaleed ee isagu aan degel keliya ku ekayn. Waxa uu ka dhex samaysmay is-dhex-galka bulshada iyo hadal wadaagooda. Waxa kale oo dooqaabkan lagu magacaabi karaa AF-MAALMEED. Waxa af-dhabtuhu uu adeegsadaa erey walba oo jira, laqbaha uu doono ha ka soo jeedee, si uu ugu haasaawo ama ugu sheekeeyo ama ugu hadlo. Looma kala fiirsado ereyadiisa meeranaha inay yihiin, kuwo qalaad, iyo inay yihiin kuwo sixin, waxa meeranaha laga eegaa uun in lagu kala warqaadan karo, ujeeddadaas ayuu u samaysmaa meeranuhu. Dooqaabada afka, waxa ugu balaadhan meeranaha, waa-na dooqaabka loogu adeegsiga badan yahay. Boqolkiiba sideetan (80%)- Meeranaha ayaa la adeegsadaa marka la is barbardhigo dooqaabyada afku leeyahay. MEERANAHA aan tusaalayaal ka bixiyo,sida uu uga duwan yahay, af-haaneedka aynu u gol-leenahay. Marka ay MEERANE tahay, waxa uu qof dhahaa "Usbuucii hore ayaan xafiiskiisa aaday" ,mid kale wuxuu dhahaa "Wiigii hore ayaan xafiiskiisa tagay", mid kale wuxuu dhahaa "Sitimaankii hore ayaan xafiiskiisa aaday", Halkan waxaad ku arkaysaa siyaabo dhacdogal ah, oo la adeegsaday seddex erey oo kala af ah,oo isku macne ah: USBUUC,WIIG,iyo SITIMAAN. Waa-na seddex erey oo af-Soomaaliga meeranihiisa ku jira.Balse marka af-haaneedka la tiigsanayo waxa la dhahayaa "TODOBAADKII hore ayaan xafiiskiisa aaday". Haddaba MEERANUHU waxa uu ka yara habboonaan hooseeyaa AF-HAANEEDKA.
1.3- Guraab(Slang): Waa dooqaab aan baahsanayn oo ay wada yeeshaan xayn bulshada ka mid ahi, iyagoo ereyada , u jabaq-dhabanaya si sarbeebeed, ama si ka maldahan dadka intiisa kale. Waxa kale oo lagu magacaabaa AF-SUUQDI. Facii walba waxa oogma Af-guraabeed cusub, kaasoo intaas soo wada kacaantay isla garan karaan. Tusaalayaal haatan jira. Koox dhalinyaro ah oo isu sheegaya qofkii hebel inuu waashay -waxay dheheen "Hebel dhiishkaa(The Dish) dhaqaaqay.",qaar kaloo qof isku buuqay ka hadlaya,waxay dheheen "Kii hebel ahaa baan arkoo dabaylaha qoraya.": Waa siyaabahaas sarbeebta u badan guraabku, ee aanuu macne dhaadan karin qofka xayntaas isla taqaan ka baxsan.
1.4-Intiraab(Jargon): Waa dooqaab kale, oo ku dhisnaada tiraabgan(Terminology) ay isla yaqaanaan wadar ama rabac isku hawl ah, ama isku shaqo ah,kuwaasoo ereyadii shaqadooda afsi u gaara ka samaystay,oo kolay ka macne daahnaanaya bulshada guud. Waxa uu si ahaan la sansaan yahay guraabka,oo aynu soo xiganay dooqaabka uu yahay.
FOOCA LABAAD EE AFKA:
Waxa jira laba qaab oo QORNAANLUHU (THE LITERATURE) leeyahay,mid waa Soobaan midna waa Suugaan.
2.1- SOOBAAN (PROSAIC)